समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पाउने ? हेर्नुहोस सिट संख्या सहित – Vision Khabar
समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पाउने ? हेर्नुहोस सिट संख्या सहित
। १ पुष २०७४, शनिबार १४:४३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको मतगणना लगभग सकिएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट सिट पाउन चाहिने कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत पाँचवटा दलले मात्र ल्याएका छन् भने प्रदेशसभामा पनि यीनै दल हाबी भएका छन् । प्रदेशसभामा सिट कायम गर्न १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फबाट दलहरुले जित्ने सिटको हिसाबकिताव यस्तो छ ।
प्रकाश ढकालले लेख्नु भएको समाचार उज्यालो अनलाइनबाट साभार